UZinhle Madela wumculi we-Afro-pop, isishoshovu samasiko esiNtu nomphathi wenkampani yobuciko iHeArt Prints - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UZinhle Madela wumculi we-Afro-pop, isishoshovu samasiko esiNtu nomphathi wenkampani yobuciko iHeArt Prints
Usemncane wawuphiwa imali?
Ngangiyithola impela kanti yileyo ndlela engaba nabangani abaningi ngayo. Umama wayewumhlengikazi kanti uR2 enganginikwa wona ngisesesikoleni samabanga aphansi wawuyimali enkulu. Ngangikwazi ukuthenga izinto ezimbili ngesikhathi sekhefu, ngiphinde ngithenge futhi uma sekuphume isikole. Isiqeda, ama-chips, isixavathi, imvuthu, iyobo, i-ice block nokunye okuningi. Konke kwakubiza u-50c ngaleso sikhathi.
Ngayivula (ngenza) uGrade 4 ngenxa yokuthi ngemukelwa yibhange Ithala, njengoba lalifike esikoleni lizozikhangisa.
Uma ukhumbula ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?
Ngafunda ukuthi ukwenza nokubeka imali kuyinto engelula. Esengikufundile ngami, okusenzeka namanje, wukuthi ngiwumuntu ozwelayo kwezezimali (kangangokuthi) ngibuye ngibe budedengu ngemali futhi nginokuthatha izinqumo ezingezinhle ngayo ngenxa yokuthi ngiwumuntu othatha yonke into ayifake enhlizyweni, loko okungekuhle neze ngoba imizwa ayiyikhulisi imali.
Ngaqala ukusebenza ngiseneminyaka ewu-14, (ngifunda) uGrade 9. Ngangiwumdansi womculi we-Afro-pop uBongi Dube. Uma simdansela sasikhokhelwa uR500. Uma sibe nemicimbi emine sasithola uR2 000. Yilowo-ke umholo wami wokuqala.
Angisakhumbuli kahle kodwa engikukhumbulayo wukuthi ngahamba ngayothenga. Ngathengela (abasekhaya) izinto zikaKhisimuzi eBerea Centre eThekwini. Kwakuyizinto eziningi njengezikhwama nokunye, kwase (kuthi) (esalayo) yonke ngayipha umama.
Kuningi kakhulu engingakubala. Wukukhokha imali yokufunda enyuvesi, wukusiza umndeni wami, yizindleko zokufunda komshana wami enyuvesi, ngalungisa nasekhaya. Kodwa okungijabulisa kakhulu engakwenza ngomholo wami we-internship wukwenza i-EP yami ebizwa ngokuthi Iduku. Zonke izindleko zokwenziwa kwayo ngazikhokhela mina.
Wukuboleka abangani (nabakithi). Ukwenza loko kuyingozi enkulu. Kungcono ukuvele ukubuke ngokuthi uyabapha nje kanti uma ufuna ukubasiza, banike loko (onamandla ako), ungagcini usuwenza izikweletu ezingaphezu kwamandla akho ngoba nakhu wenzela bona.
Wake walutheka ngokungena ebhanoyini?
Ngake ngasebenzela inkampani eyayithathwa njengebhanoyi. Mina (ngangiyisisebenzi) nje kuphela ngiholelwa ngomsebenzi engisuke ngiwenzile. Kodwa ibhanoyi lona uqobo angikaze ngilijoyine noma ngingene kulona.
Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?
Wukuthi kubalulekile uqale ngokukhokha imali yomnikelo kuqala bese ubeka (enye), usebenzise esala lapho ezidingweni zakho; ngoba ngeke ukwazi ukuqala ngokusebenzisa imali kuqala ugcine ngokuyibeka.
Ngingakha isitolo sami sokudla, ubucwebe nemigexo. Kungaba yisitolo engizokwazi ukwenza kuso imali eningi bese kuthi esalayo ngiyitshale emabhizinisini engikholelwa kuwona, amabhizinisi enganyelwe abasekhaya. Namabhizinisi aphethwe ngabantu besifazane ngingaweseka, ngitshale nakuwona. Uma ngiqeda lapho ngingazithengela umuzi, imoto nezinye izinto ezinhle.
Ungaweluleka uthini amanye amaciko ngokuphatha imali?
Kwamina uqobo ngisenenkinga yokuphatha imali kodwa-ke ngikholelwa ekutheni sonke siyafunda, nami uqobo ngisekuleso sigaba sokufunda. Ngiweluleka ngokuthi akuqonde ukuthi senza imali, kungabi imali oyifunayo kodwa uma sizifundisa ukuthi kuleyo naleyo mali oyenzayo kumele kube khona oyilondolozayo, uzokwazi ukubona izithelo zokusebenza kwakho. Kubalulekile kithina njengamaciko ukulondoloza imali. Kusemqoka kakhulu nokuthi sicabange ukuthi yiziphi izindlela esingazisebenzisa ukuze siqhubeke nokwenza imali, hhayi ukugxila ekufuneni ukwenza imali ngobuciko bethu kuphela. Ukwenza isibonelo nje, mina ngiwumculi kodwa nginomsebenzi engiwenzayo futhi eceleni njengoba kunenkoleloze yokuthi uma uba nomsebenzi owenzayo eceleni awunampokophelo yobuciko bakho, okungelona iqiniso.
Isitshudeni sasenyuvesi esasigwema ukuvaleka saqhamuka necebo lokudayisa, okwagcina kusizalele ibhizinisi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE